Izindaba - Ngabe ingaphezulu levalve yensimbi engagqwali nayo igqwala?
Ingabe ingaphezulu le-valve yensimbi engagqwali nayo igqwala?
Iyini insimbi engagqwali? Ekuqondeni kwabantu abaningi, "insimbi engagqwali" iyinsimbi engeke igqwale, kepha amakhasimende amaningi akhiqiza izindawo zokugqwala lapho kuvela amabala ensundu (amabala) ansundu ebusweni bamaphayiphu wensimbi engagqwali. Siyini isizathu? Amaphayiphu wensimbi angenasici anamandla okumelana namachibi asemkhathini-okungukuthi, angenasici, kepha futhi anamandla okonakalisa endaweni equkethe i-asidi, i-alkali, usawoti-okungukuthi, ukumelana nokugqwala. Kodwa-ke, usayizi wekhono layo lokulwa nokugqwala uyashintsha ngokwakhiwa kwamakhemikhali kwensimbi uqobo, isimo esivumelanayo, izimo zokusetshenziswa kanye nohlobo lwendawo ezungezile. Njengepayipi lensimbi elingu-304, endaweni eyomile nehlanzekile, linekhono elihle kakhulu lokulwa nokugqwala, kepha uma lihanjiswa endaweni esolwandle, kungekudala lizoqwala enkungwini yolwandle equkethe usawoti omningi; futhi 316 ipayipi lensimbi libonisa okuhle. Ngakho-ke, akuyona noma yiluphi uhlobo lwensimbi engenasici, emelana nokugqwala nokugqwala kunoma iyiphi indawo.
I-valve yensimbi engagqwali isuselwe kufilimu e-chromium-rich oxide (ifilimu evikelayo) e-chromium ecebile ngokweqile, eyakhiwe ebusweni bayo ukuvimbela ukungena nokugcwala kwama-athomu e-oxygen ekuqhubekeni nokuthola amandla okumelana nokugqwala. Kanye ngasizathu simbe, le filimu ibhujiswa ngokuqhubekayo, ama-athomu e-oksijini asemoyeni noma ketshezi azoqhubeka nokungena noma ama-athomu ensimbi asensimbi aqhubeke nokuhlukaniswa, kwakheke i-iron iron oxide, bese kuthi insimbi igqwale ngokuqhubekayo. Kunezinhlobo eziningi zokulimala kule filimu ephezulu,
Kunezinhlobo eziningana zama-valve wensimbi angenasici ajwayelekile empilweni yansuku zonke:
1. Ubuso be-valve yensimbi engenasici buqoqa uthuli noma ezinye izinhlayiya zensimbi eziqukethe ezinye izinto zensimbi. Emoyeni oswakeme, i-condensate phakathi kokunamathiselwe nensimbi engagqwali ixhumanisa lezi ezimbili nebhethri elincane, eliqala i-electrochemistry Reaction, ifilimu evikelayo ilimele, ebizwa ngokuthi i-electrochemical corrosion.
2. Ijusi lezinto eziphilayo (njengekhabe nemifino, isobho le-noodle, isikhwehlela, njll.) Linamathela ebusweni be-valve yensimbi engenasici. Lapho kukhona amanzi ne-oxygen, kwakha i-organic organic, bese i-organic organic izokonakalisa ingaphezulu lensimbi isikhathi eside.
3. Ubuso be-valve yensimbi engagqwali buqukethe i-asidi, i-alkali kanye nosawoti izinto (njengamanzi e-alikhali namanzi wamatshe atshiza ekuhlobiseni udonga), okudala ukugqwala kwasendaweni.
4. Emoyeni ongcolile (njengomkhathi oqukethe inani elikhulu lama-sulfide, ama-carbon oxides, nama-nitrogen oxides), amanzi afingqiwe azokwakha i-sulfuric acid, i-nitric acid, ne-acetic acid liquid spots, okudala ukugqwala kwamakhemikhali. Izimo ezingenhla zingadala ukulimala kwefilimu evikela insimbi engagqwali futhi kudale ukugqwala.
Ngakho-ke, ukuze kuqinisekiswe ukuthi ubuso bensimbi bukhanya unomphela futhi abugqwala, sincoma ukuthi:
1. Ubuso be-valve yensimbi engagqwali yokuhlobisa kufanele ihlanzwe futhi ihlutswe njalo ukususa okunamathiselwe nokususa izinto zangaphandle ezidala ukuguqulwa.
2. I-valve engu-316 yensimbi engagqwali kufanele isetshenziswe endaweni esolwandle. Izinto ezingama-316 zingamelana nokugqwala kwamanzi olwandle.
3. Ukwakheka kwamakhemikhali kwamapayipi wensimbi engagqwali emakethe awakwazi ukuhlangabezana nezindinganiso zikazwelonke ezihambisanayo, futhi awakwazi ukuhlangabezana nezidingo zezinto ezingama-304. Ngakho-ke, kuzodala nokugqwala, okudinga ukuthi abasebenzisi bakhethe ngokucophelela imikhiqizo kubakhiqizi abaziwayo. Ukunakwa nokwakhiwa kwamaphoyinti wokunaka Ukuvikela ukuklwebheka nokunamathela kokungcola ngesikhathi sokwakha, kwakhiwa ama-valve wensimbi angenasici esimweni sefilimu. Kodwa-ke, ngokwandiswa kwesikhathi, izinsalela zekhambi lokunamathisela lihambisana nesikhathi sokusetshenziswa kwefilimu. Ngemuva kokukhipha ifilimu ngemuva kokwakhiwa, indawo kufanele igezwe, futhi kufanele kusetshenziswe amathuluzi wensimbi akhethekile. Lapho uhlanza amathuluzi ajwayelekile ngensimbi ejwayelekile, kufanele ihlanzwe ukuvimbela ukunamathela kokufakwa kwensimbi. . Ukunakekelwa kufanele kuthathwe ukuze kungavumeli uzibuthe onakalisayo kakhulu kanye nemithi yokuhlanza okunethezeka kwamatshe ukuthinta indawo engagqwali. Uma bexhumana, kufanele bagezwe ngokushesha. Ngemuva kokuthi ukwakhiwa sekuqediwe, sebenzisa okokuhlanza okungathathi hlangothi namanzi ukugeza usimende, umlotha we-fly, njll.
Ngokufingqa, ama-valve wensimbi angenazinsimbi ngeke abonise ukugqwala ngokuphelele, futhi asazoqhubeka nokugqwala ngaphansi kwezimo ezithile. Kufanele sifake, sigcine, futhi silungise ama-valve wensimbi engagqwali ngokuhambisana ngokuqinile nezidingo, bese sizama ukulawula isimo sokugqwala kwamavalvu wensimbi engagqwali ngaphansi kwezimo ezithile.
Isikhathi Iposi: May-02-2020